जग्गासम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी ‘भूमी सुशासन’ एपमा – आइसिटी खबर:सूचना सञ्चार तथा प्रविधि खबर ICT Khabar.com : No.1 Tech INFO ICT News Site
यू-ट्यूबबाट यसरी भिडियो डाउनलोड गर्न सकिन्छ
ह्वाट्सएपमा पनि ह्याकिङको खतरा !
३ करोड एन्ड्रोइड मोबाइलमा गुगल नचल्ने
विश्वभरको इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदैछ, किन ?
चितवनका एक युवकले फेसबुक लाइभमै आत्महत्या गरे
फेसबुक ह्याक, पाँच करोड फेसबुक एकाउन्ट ह्याकरको कब्जामा
फोटो खिच्दा साइवर कानून लाग्ने, जरिवाना एक करोड ६० लाख
Home / आइसिटी नेपाल / जग्गासम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी ‘भूमी सुशासन’ एपमा
जग्गासम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी ‘भूमी सुशासन’ एपमा
ICT Khabar/आइसिटी खबर July 22, 2018	आइसिटी नेपाल, आइसिटी न्युज/टेक अपडेट, समाज खबर Leaveacomment 224 Views
सरकारले ल्यायो ‘भूमी सुशासन’ एप
काठमाडौं–सरकारले भूमिसम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी दिने मोवाईल एप्स सञ्चालनमा ल्याएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘भूमि सुशासन’ नामको एप्स प्रयोगमा ल्याएको हो । यस एपलाई नक्सा नामक कम्पनीले डेभलप गरेको हो ।
एप्समा मन्त्रालयका भूमिसम्बन्धि सेवाहरुको सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध हुने छ । भूमिसम्बन्धि कानुनसमेत एप्समा समेटिएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले जानकारी दिए । मोवाईल एप्समा भूमि नापचाँज सम्बन्धि जानकारी समेटिएको छ ।
एप्समै मालपोत, नापीलगायतका कार्यालयमा दिइने निवेदनका ढाँचा डाउनलोड गर्ने ब्यवस्था छ । सामान्य नागरिकले जग्गासम्बन्धि भोग्ने समस्यालाई एप्सले समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ । जग्गाबारे सर्बसाधारणमा बारम्बार उठ्ने जिज्ञासालाई समेटेर एकै ठाउँमा उत्तरहरु संकलन गरिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी पदावलीहरुको अर्थ नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा राखिएको छ । मालपोत र नापी कार्यालयको ठेगानासहितको विवरण त्यसमा समेटिएको छ ।
भूमिसम्बन्धि सेवा आम नागरिकको लागि अत्यावश्यक छ । यस एपमा भुमिसम्बन्धि कार्यालय, त्यहाँबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवाहरु, आफूलाई चाहिने कार्यालय पत्ता लगाउने तरिका र नापी क्यालकुलेटरसमावेश गरिएको छ ।
‘यस एपबाट मालपोत, नापी र भूमिसुधार कार्यालयका मुख्य सेवाहरुको विवरण आम नागरिकले सजिलै प्राप्त गर्ने छन्,’ एप डेभपल गर्ने नक्साका संस्थापक उत्तम पुडाशैनीले भने, ‘यस एपमा राखिएको बडापत्रमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालका सबै विभाग र कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरु, ती सेवा लिन आवश्यक कागजात, लाग्ने दस्तुर, समय, जिम्मेवार अधिकारीको विवरण राखिएको छ ।
नागरिकले यस एपबाट आफ्नो प्रदेश, जिल्ला र वडा नम्बर राखेपछि आफूले सेवा लिने कार्यालयको बिवरण उपलब्ध हुने पुडाशैनीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस एपमा रहेको नापी क्याल्कुलेटरले जग्गाको लम्बाई, चौडाइ प्रविष्ट गराएर क्षेत्रफल विभिन्न एकाईमा परिवर्तन गर्न मिल्ने बनाइएको छ ।
यस एपको अर्को बिशेषता भनेको नेपालको प्रादेशिक र सबै ७ सय ५३ स्थानीय तहको नक्सा हेर्न पाउनु हो । ‘यस एपबाट हरेक नागरिकले सबै स्थानीय तहको नक्सा हेर्न पाउने मात्र हैन, डाउनलोड गर्न समेत सक्नेछन्,
Previous सामसुङ S10 का विशेषता यस्ता छन्
Next नेपालमा पहिलोपटक ग्लोबल साइबर सेक्युरिटी समिट 2018
रसिया टुडेको रिपोर्ट अनुसार इन्टरनेट कर्पोरेसन अफ असाइन्ड नेम्स एण्ड नम्बर्सले क्रिप्टोग्राफिक की सिस्टमको मर्मत ...
फेसबुक अभिशाप बन्दै, दैनिक ८ हजार प्रयोगकर्ताको मृत्यु एक रिपोर्ट
साइबर हमलाकारी देशहरुमा अमेरिका, रुस, चीन र इजरायल अगाडी
फेसबुक प्राइभेसीप्रतिको गम्भीर चासो ! दिग्गज कम्पनीहरु फेसबुकबाट अलग्गिदै